Usegxile ekwaluseni owaduma kuKhozi
OWAYENGUMSAKAZI woKhozi FM, uMazweni ‘Joe’ Hudla ozohlonishwa
CHARLES KHUZWAYO | December 2, 2019
OWAYEYISILOMO soKhozi FM, uMazweni “Joe” Hudla, uthi usezibambele mathupha ekuluseni izinkomo zakhe ekhaya njengoba engasekho emsakazweni. UJoe, owazakhela udumo ngokusakaza imidlalo yebhola emsakazweni nakwithelevishini, uthathe umhlalaphansi ngo-2018 emuva kokusebenza kwa-SABC iminyaka engu-38.
Echaza, uthe usegxile kakhulu ekufuyeni izinkomo kangangoba usenezingu-63 futhi usenezindawo ezintathu asezitholile azofuya kuyo izimbuzi nezimvu.
“Sengihlale ngimatasatasa kakhulu kunakuqala ngoba ngizibambela mathupha ekuluseni imfuyo yami kodwa bakhona engizobaqasha bese ngibayisa kulezi zindawo engizofuya kuzo.”
Uthe angalemukela ithuba lokucija abasakazi bezemidlalo abasafufusa ukuze bahambe ezinyathelweni zakhe.
Kwenzeka lokhu nje, uJoe uzophinde ahlonishwe emcimbini osoLundi ngoDisemba 18.
Uthe namanje usashaqekile ngale miklomelo aselokhu enikezwa yona ngoba lokhu akukaze kwenzeke kwabanye ozakwabo ababeyibambe ngaphambi kwakhe. “Ngiyazibuza ukuthi yini le engaka engayenza ngoba kunabanye engaziyo ukuthi angifikanga ezingeni labo ngokusakaza,” kusho yena.
Uthe ucabanga ukuthi into eyayimenza avelele ekusakazeni ukuqonda umdlalo webhola nokuthi kufanele wenze njani ukuthatha abantu ngamehlo engqondo.
“Ziningi izinto okufanele zifundwe ngabasakazi abaseza emuva kwethu ukuze bahambe ezinyathelweni zami. Uma ngingathola ithuba ngingabacija. Angicabangi ukuthi nami ngangenza ngesiphiwo kuphela kodwa ngangizifundisa.”
Umgqugquzeli walo mcimbi uCebo Buthelezi weMakubenjalo Community Project, uthe baqoke uHudla ngenxa yamagalelo akhe ekufukuleni intsha efuna ukuba ngabasakazi futhi eyisibonelo esihle nasentsheni yaseZululand namaphethelo.
“Sithe asimbungaze esaphila ukuze nabanye abantu bazi ukuthi uma wenza kahle emphakathini bazothola umvuzo. Ugqugquzele inqwaba yentsha efuna ukwenza kahle emphakathini,” kusho uButhelezi.
Uthe lo mcimbi uzoqala ngoDisemba 17 ngemidlalo yebhola bese ngoLwesithathu kube nowebhola lomnqakiswano. Umcimbi uyophethwa ngoDisemba 19.